Geranium | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na geranium n'ime ụlọ anaghị ada
Geranium, ma ọ bụ pelargonium, bụ ama maka nlekọta na-enweghị atụ na ọdụm dị iche iche dị iche iche, nke na-adọta mmasị nke ndị na-eto ugbo. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha na-enwe nsogbu nkịtị: osisi ahụ na-akwụsị blooming. N'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya n'ihe ndị kpatara omume a nke ifuru na chọpụta ihe ọ dị mkpa ka a mee ka pelargonium na-amasị anya na okooko osisi.
Kedu esi lekọta geraniums n'oge oyi n'ime ulo?
Geranium, ma ọ bụ pelargonium - ụlọ a maara nke ọma n'ime ime ụlọ. Nke a mara mma ma mara mma bụ onye na-anọkarị na windo ụlọ. N'ime ihe a chọrọ, anyị ga-ekwu maka otu esi edozi oge oyi nke geraniums, ọnọdụ ndị dị mkpa ka e kere iji chekwaa osisi n'oge oyi ma hụ na okooko osisi dị ogologo.
Ugbo geranium: ọgwụ Njirimara na contraindications, cultivation
Ọtụtụ ndị na-eto eto chọrọ ịmata otú e si eto ahịhịa ala geranium na iji ya n'ụlọ. Anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ọgwụgwọ nke osisi a nwere, otu esi kwadebe ma chekwaa ngwaahịa sitere na ya, ma tụlee usoro nke ịkụ ala geranium na ilekọta ya. Geranium nke na-edozi ugbo (grouse, geranium geran) bu osisi nke a na-arusi ogwu nke Geranium, nke Geranium.